Mỳ ăn dặm là gì? 10 sản phẩm tốt nhất 2022 mẹ nên lựa chon cho bé | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Mỳ ăn dặm là gì? 10 sản phẩm tốt nhất 2022 mẹ nên lựa chon cho bé | Muasalebang in Muasalebang
Ngokuvamile, izingane ezifika ezinyangeni eziyisi-6 ziqala ukudla ukudla okuqinile, ngakho omama bagxila kakhulu ekukhetheni ukudla okuqinile kwezingane. Esikhundleni sokudla ufulawa ohlanzekile noma iphalishi, okwashesha ukucikeka izingane, omama abaningi babesebenzisa ama-noodle asheshayo benzelwe izingane zabo. Nokho, kunezinhlobo eziningi emakethe namuhla ukukhipha ama-noodleUhlobo ngalunye lwama-noodle lunokwakheka okunempilo okuhlukile, isisindo, ubudala, kanye nentengo. Ngakho-ke, ukuze ukhethe uhlobo olufanele lwama-noodle futhi uqinisekise umsoco wezingane, kufanele ufunde futhi ucwaninge ngokucophelela.
Khona esihlokweni esilandelayo, ngizokwethulela ama-noodle angu-10 angcono kakhulu ezingane namuhla.
1 Ayini ama-noodle?
1.1 1. I-Hakubaku ama-noodle asheshayo
1.2 2. Ukudla okulula kwe-Mennosato
1.3 3. Wakodo
1.4 4. Inkomishi yeNissin
1.5 5. Ama-noodle e-Itsuki asheshayo
1.6 6. Ama-noodle aseTokyo
1.7 7. Sawubona kitty ukudla okulula
1.8 8. Nguyen Minh Pumpkin Noodles
1.9 9. Ama-noodle E-MARKAL
1.10 10. Naturata noodles osheshayo
Ama-noodle okulumula awuhlobo lokudla kwefayibha ezinganeni ezisukela ezinyangeni eziyisi-6 kuya phezulu eziqala ukudla ukudla okuqinile. Ngenxa yokuthi iwukudla kwezingane ezincane, yenziwe ngosayizi ofanele kakhulu, izithako zokudla okunomsoco eziqukethwe kuma-noodle nazo ziphephile futhi zigcwele imisoco ukusiza izingane zikhule ngokugcwele. Ngakho-ke, ukonga isikhathi nokwehlukanisa ukudla kwezingane ukuzisiza zidle okumnandi kakhulu, ama-noodle asheshayo ayisinqumo esihle.
Ngaphezu kwalokho, ama-noodle alumulayo awenziwa nje kuphela ngofulawa kodwa futhi ahlanganiswe nemifino, izithelo, … ukusiza ukudla kwezingane kuchichima. Akukhona lokho kuphela, ukusetshenziswa kokudla kwezingane ngendlela yama-noodle kuzosiza ingane ukuba ibambe ukudla kanye nokusebenzisa ubuciko nokuguquguquka kwezandla zayo. Ngakho-ke, ama-noodle alumulayo athenjwa omama abanambitheka entsha kanye nokudla okunomsoco.
1. I-Hakubaku ama-noodle asheshayo
Ama-noodle e-Hakubaku asheshayo ngaphandle kukasawoti, asikho isidingo sokuphinda uhlanza ama-noodle ngemva kokubilisa, ungasebenzisa amanzi e-noodle ukupheka umhluzi.
100% kafulawa kakolweni, akukho okokugcina kanye nezinye izinto, ama-noodle angu-2.5 cm aphephile ukuthi izingane zihlafune futhi zigwinye.
Ama-noodle awaqukethe amaprotheni angezwani nokudla izingane ezingawahlafuna kalula futhi ziwagaye ngokushesha.
Iqukethe amavithamini namaminerali amaningi okukhula okunempilo kwengane yakho.
Lapho izingane zinesithukuthezi ngephalishi, omama abenza ama-noodle e-Hakubaku ukuze bashintshe ukudla kwezingane zabo yisixazululo esiphumelela kakhulu esithandwa yizo zonke izingane.
I-HAKUBAKU – i-noodle yezingane kusukela ezinyangeni ezingu-5 kuya kwezingu-9 nangaphezulu, i-100g enobushelelezi obuthambile, ukunambitheka okumnandi, akukho ukunambitheka kukasawoti, ngakho-ke ifaneleka kakhulu kubantwana kusukela esigabeni sokuqala sokulunyulwa. Ngenxa yokuthi ama-somen noodle ngokuvamile enziwa ngebhali nofulawa kakolweni, ayizitsha zaseJapane ezisetshenziswa kakhulu ngoba zimnandi futhi zinomsoco.
2. Ukudla okulula kwe-Mennosato
Ingabe umkhiqizo wemakethe yaseJapane – imakethe enamazinga aphezulu kanye namazinga aqinile okuphepha.
Awukho usawoti, awukho umbala wokudla, awukho ukunambitheka kokwenziwa, awukho ushukela futhi awukho nezinto ezilondolozayo.
Yenziwe ngofulawa kakolweni ohlanganiswe nezithelo nemifino ehlukahlukene eyi-10, equkethe imisoco eminingi.
I-Broccoli iwukudla okunothe nge-fiber, amavithamini E, C, A, K, iron, folate, njll., okubalulekile ezinganeni ezincane. Kungenxa yalezi zinzuzo ukuthi i-broccoli ivame ukuvela ekudleni kwezingane.
Izithako: I-Organic Wheat Flour 97%, Organic Broccoli Powder 2%, Amanzi 1%.
Ama-noodle adliwa kalula, amnandi ukuze avuse ukunambitheka kwengane. (Kufanele kwengezwe kumenyu yokulunyulwa kwezingane ezisukela ezinyangeni eziyisi-9 kuye kweziyi-11).
Ama-noodle asheshayo e-Wakodo enziwa ngebhali ukuze kuqinisekiswe umsoco nokuphepha kokudla.
Awekho ama-colorants, izithasiselo nama-preservatives asetshenziswayo.
Intambo isikwa ibe mfishane ngo-2.5cm ukuze izingane ziwudle kalula.
Ingasetshenziswa njenge-stir-fry, i-stir-fry, noma uketshezi (okuhlanganiswe ne-dashi stock kuyisinqumo esihle).
Ama-noodle ase-Wakodo Japanese Salted alungiswa ngokuvumelana nezindinganiso zaseJapane.
Ama-noodle awasebenzisi usawoti, ngakho-ke alungele kakhulu izingane futhi athandwa komama nezinsana.
Ngokuvamile esetshenziswa njengokudla okuyinhloko kwabantwana, lapho benesithukuthezi ngelayisi ne-porridge, lesi yisixazululo esingcono kakhulu.
Umsoco ophelele, ongenawo amakhemikhali, ama-colorants, ama-preservatives, uphephe ngokuphelele futhi unikeza ingane yakho ukudla okunomsoco okuphezulu kanye ne-fiber.￼
Idizayinelwe ngesimo esivunguzayo, ama-noodle amancane kanye nokunambitheka okumnandi kulungele ngokuphelele izingane, omama abadingi ukuchoboza noma ukusika ama-noodle.
Ipakishwe esikhwameni se-zip ukuze isetshenziswe kalula futhi igcinwe.
4. Inkomishi yeNissin
Ama-noodle e-Nissin MUG awathosiwe neze, awababayo.
Ama-noodle e-MUG ahlinzeka nge-Vitamin B1, B2 ukusiza ukuguqula Amaprotheni namafutha abe umthombo wamandla wemisebenzi yengane.
Ama-noodle e-MUG anezela i-Calcium, asekela ukukhula kwamathambo namazinyo omntwana.
Siza ingane yakho ukuthi ikhule kangcono futhi ikhuthaze ukuphuma kwamazinyo ngesikhathi ilunyulwa.
Ama-noodle athambile, ahlafunwayo asiza izingane ukuba zithuthukise imisipha yomhlathi, asize izingane zibe nekhono lokuhlafuna.
Inyama enomsoco uma ixubene namanzi ashisayo iyakhula ifane neBhele, Impungushe, Ingulube… ihehe ilukuluku lomntwana, idale injabulo enganeni lapho idla.
Umkhiqizo awuqukethe i-MSG, ama-noodle awathosiwe.
Yenzelwe ngokukhethekile izingane ezineminyaka engu-1 ubudala, iphephe kakhulu futhi ifaneleka.
Ama-noodle e-Nissin MUG azokusiza ukuthi udle ngokushesha, okumnandi nakakhulu futhi kubalulekile ukuthi ushintshe ukunambitheka kwansuku zonke kwengane yakho ukuze uyisize ihlale igcwele.
Xem Thêm [Reviews] Top 8 Đồng hồ định vị trẻ em loại tốt và bền nhất 2022 | Muasalebang
5. Ama-noodle e-Itsuki asheshayo
Ama-noodle okulumula e-Itsuki anemibala eyahlukene, ekhishwa ngokwemvelo kuma-tubers, futhi aqukethe ama-antioxidants.
Yenza kube izixha ezinhle ezingu-4 zama-noodle.
Ama-noodle e-Itsuki asheshayo athandwa kakhulu futhi anomsoco.
Ama-noodle e-Japanese Itsuki Foods enziwa ngofulawa kakolweni kanye nezitshalo zemifino ezifana nesipinashi, ithanga, nezaqathi ezitshalwa ngokuphephile e-Kyushu, zixutshwe namanzi aphuma ngaphansi komhlaba avela edolobheni elintantayo lase-Aso. Ulimi lwesiJapane, oluletha ikhwalithi yemifino emnandi nenomsoco. ama-noodle.
Umbala ukhishwa emifino ukuze unikeze ama-noodle umbala wemvelo, kuyilapho engeza amavithamini namaminerali avela emifino ku-noodle ngayinye.
Sebenzisa ithanga ukwenza ama-noodle aphuzi, ama-noodle awolintshi aphuma ku-carrot, kanye nama-noodle aluhlaza ngokwemvelo esipinashi.
Akha ama-noodle angu-4 amahle Ama-noodle ahlanganiswe abe izinyanda ezi-4, kuxutshwe ama-noodle anemibala ndawonye, ​​enze imibala ekhangayo nezinambitheka zezitsha.
Ama-noodle e-Somen asetshenziselwa ukwenza ama-noodle athosiwe, ama-noodle abandayo noma ama-noodle abandayo.
Ama-noodle anemibala uma ephekiwe asagcina imibala yawo emihle, avuselela ukunambitheka nokunambitheka kwabasebenzisi, ikakhulukazi izingane.
Ama-noodle okukhishwa kwemifino asiza ukuhlinzeka ngamavithamini nezakhamzimba, okwenza izitsha zibe mnandi futhi zibe nomsoco.
6. Ama-noodle aseTokyo
I-Tokyo Noodle Children’s Noodles inikeza imisoco ephelele, amaminerali kanye ne-calcium. Iphakethe lama-noodle angama-30g linikeza cishe i-130kcal ezinganeni.
Kulungele kakhulu ukuthwala uhambo, amapikiniki ukondla ingane yakho noma nini, noma kuphi.
Izithako zemvelo ngokuphelele, eziphephile kubantwana.
Ukunambitheka okumnandi, khuthaza ingane ukuba idle okumnandi kakhulu.
Ama-noodle ase-Tokyo Japanese enza kube lula ngomama ukuphekela izingane zabo ukudla okumnandi, okunomsoco, nokucebile.
Ukusebenzisa izinguquko zokudla ngemikhiqizo ukuze usize ingane yakho ukuba ingabi nesithukuthezi ngokudla, izophinde ithole ukunambitheka kwayo futhi isaqinisekisa ibhalansi yokudla okunomsoco.
Ama-noodle e-Tokyo Noodle asheshayo angokwemvelo ngokuphelele, awasebenzisi amakha.
I-noodle ngayinye yaseTokyo igcwele ukunambitheka, omama abadingi ukunambitha isinongo esiningi ngaphandle kokwengeza ezinye izithako ezinomsoco ukuze benze ingane ibe mnandi kakhulu.
I-Tokyo Noodle Children’s Noodles inokunambitheka okumnandi, izithako zemvelo ngaphandle kokukhathazeka ngokushisa noma ukuthikameza isisu somntwana, ezisiza ekuguquleni ukunambitheka kwengane kuyilapho zisanikeza imisoco egcwele.
7. Sawubona kitty ukudla okulula
I-Hello kitty snacks isiza izingane ukuthi zifunde ukudla ama-rough, ukuhlafuna nokudla kangcono.
Umkhiqizo wenziwe ngokolweni waseJapane ophelele, ongenawo usawoti kanye nezivimbelakuvunda, ulungele impilo yengane yakho kanye nohlelo lokugaya ukudla.
Kukhona amajamo ahlekisayo: izimbali, amakati ekati amahle nathandekayo.
Xem Thêm 12 phần mềm học tiếng anh cho bé cực dễ hiểu bố mẹ nên biết | Muasalebang
Ama-noodle e-Hello Kitty alumulayo anomsoco ezinganeni ezinezinyanga ezingu-9 kuya phezulu, adala injabulo eyengeziwe esidlweni ngasinye ngamajamo ahlekisayo: i-goa, ikati elihle nelithandekayo.
Ilungele kakhulu izingane ukuthi zishintshe ukudla lapho zinesithukuthezi ngephalishi.
Ama-noodle ayinyama kakhulu, amnandi, anomumo omuhle ukuze avuselele ukubona kwengane.
Yenziwe ngekoroyi, ngakho-ke iyinhle kakhulu empilweni yengane yakho kanye nohlelo lokugaya ukudla.
Ama-noodle we-Hello Kitty enziwa ngezithako zemvelo ezitshalwa e-Japan, futhi awanawo usawoti nezivimbelakuvunda.
8. Nguyen Minh Pumpkin Noodles
Ama-noodle enziwa ngerayisi elingenalutho kanye nempushana yethanga.
Ama-noodle amnandi ahlafunwayo anemibala yemvelo yemifino, acutshungulwa kalula abe izitsha eziningi ezimnandi ezivela kuma-noodle athosiwe, ama-noodle amanzi, idiphu yebhodwe elishisayo.
Awekho ama-Preservatives, awekho ama-Colourants, awekho ama-Bleach, awe-Acidic, awekho ama-Anti-Mold.
Umkhiqizo muhle kakhulu empilweni, usiza ukugaya.
Ama-noodle angamathanga e-Nguyen Minh engezwa ngokuqondile nempushana yemifino eqandisiwe, ehlanganiswe nofulawa werayisi onsundu kanye nompushana wemifino ukuze kwakheke ama-noodle anemibala eminingi ekhangayo.
Ama-noodle amathanga atshalwa ngokuvumelana nezindinganiso ze-organic eziqinisekisiwe ze-US FDA.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje okomisa amakhaza ukuze kuqinisekiswe ukuhlanzeka kokudla nokuphepha.
Ama-noodle anokunambitheka okuqinile nokuhlafunwayo, asetshenziswa njengezinto ezingavuthiwe ekwenzeni ama-noodle e-Spagty akhanga ngokwedlulele ezinganeni ezisendlini.
Ama-noodle amathanga aqukethe i-fiber eningi, eyenza ukubambezela ukumuncwa kukashukela egazini, kanye nokukhuthaza ukunyakaza kwamathumbu okuvamile nokugaya kahle, ukuvimbela ukuqunjelwa kwezingane ezincane.
9. Ama-noodle E-MARKAL
Ama-noodle asheshayo ane-markal aqukethe amaminerali amaningi kanye nesitashi amuncwa kalula umzimba futhi alungele impilo.
I-100% ayinamakhemikhali, awekho ama-allergener.
I-100% ye-organic-brown pasta kakolweni.
Ama-noodle asheshayo e-Markal aqukethe amaminerali amaningi kanye nesitashi amuncwa kalula umzimba futhi alungele impilo, ngakho athandwa kakhulu, ikakhulukazi ezinganeni.
Ama-noodle anezimo ezi-2 ezihlukene ukunikeza abasebenzisi izinketho eziningi kodwa aqinisekise inani elidingekayo lokudla okunomsoco ekudleni kwansuku zonke.
Kwenziwe kusuka ku-100% AB organic powder eFrance.
Kulula ukudla futhi kulula ukulungiselela, izingane ezincane ze-BLW zifaneleka kakhulu, izingane ezindala zishintsha izitsha.
10. Naturata noodles osheshayo
Ama-noodle okulunyulwa e-naturata enziwa ngokolweni, alungele impilo yengane yakho kanye nohlelo lokugaya ukudla.
Yenziwe ngezithako zemvelo, ayinawo usawoti kanye nezinye izinto ezilondolozayo.
Ama-noodle asheshayo e-Naturata azodala injabulo eyengeziwe esidlweni ngasinye sengane yakho ngamajamo ahlekisayo.
Ama-Organic Chicken Nuggets enziwe ngokolweni, alungele impilo yengane yakho kanye nohlelo lokugaya ukudla.
Ama-noodle emvelo amise okwenkukhu azofaka isandla ekuguquleni ukunambitheka, esiza izingane ukuba zijabulele ezinye izitsha ngaphandle kwelayisi nophuthu.
I-Organic Chicken Nuggets enziwe ngezithako zemvelo, ezingenawo usawoti ngokuphelele nezinye izinto ezilondolozayo.
Ama-noodle angasetshenziswa njengesithako esiyinhloko kuma-noodle athosiwe kanye nesobho lama-noodle.
Ngenhla uhlu lwemikhiqizo engu-10 ehamba phambili yokudla kwezingane namuhla. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.